Maraykanka: Kumannaan Carruur Ah Oo Uurka Hooyadood Lagu Dhex Dilay Oo Laga Helay Guri Lagu Ururiyey - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMaraykanka: Kumannaan Carruur Ah Oo Uurka Hooyadood Lagu Dhex Dilay Oo Laga Helay Guri Lagu Ururiyey
Maraykanka: Kumannaan Carruur Ah Oo Uurka Hooyadood Lagu Dhex Dilay Oo Laga Helay Guri Lagu Ururiyey
USA (JigjigaOnline) – Haraadiga in ka badan 2,000 oo carruur uurka hooyooyinkood laga soo xaaqay ah ayaa laga helay guri ku yaalla gobolka Illinois ee dalka Mareykanka, halkaasoo uu dagganaan jiray dhakhtar horay u sameyn jiray qaliinka ilmaha lagu soo xaaqo.
Qoyska uu kasoo jeeday Dr Ulrich Klopfer ayaa helay haraadiga xilli ay doonayeen inay kala hagaajiyaan alaabta taallay guriga dhakhtarka, ka dib markii uu geeriyooday 3-dii bishan Sitembar.
Dr Klopfer ayaa xarun caafimaad ku lahaa magaalada South Bend ee gobolka Indiana, taasoo uu albaabbada isugu dhuftay markii shatigii uu ku howlgalayayay dowladdu kala noqotay sanadkii 2016-kii.
Waxaa lagu eedeeyay inuu mas’uuliyiinta maamulka ee dowladda ku war alin waayay qalliin ilmo looga soo xaaqay gabar 13 jir ah.
Wuxuu sidoo kale dhakhtarkan ku guul darreystay inuu xaqiijiyo in shaqaalaha xaruntiisa caafimaadka ay ka war hayaan howsha la xiriirtay qalliinka lagu sameeyay gabadhaas, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP.
Hase yeeshee, Dr Ulrich Klopfer ayaa sheegay in waligiis uusan ka geeriyoonin qof uu ku sameynayay qalliin ilmo soo xaaqid ah, muddadii 43-ka sano ahayd ee uu shaqeynayay.
#BREAKING: The Will County Sheriff’s office in Illinois is conducting an investigation after finding more than 2,000 fetuses at the home of former South Bend abortion doctor Dr. Ulrich Klopfer. pic.twitter.com/ONWBfkba6n
— Max Lewis (@MaxLewisTV) September 14, 2019
“Waa haweenka waxa uurka yeesha, ragga ma aha”, Dr Klopfer maxkamadda horteeda mar la dhageysanayay kiiska isaga ka dhanka ahaa, sida uu shaaciyay wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: “Waa inaan tixgalinno go’aannada ay haweenku u sameeyaan iyagoo u maleynaya inay yihiin kuwa ugu habboon noloshooda. Halkan uma imaamin inaan cidna ku kahsbo waxa ay sameyneyso. Uma joogo halkan inaan qof xukumo”.
Tirada haraadiga carruurta lasoo xaaqay ee ay boolisku gacanta ku dhigeen ayaa marka la isku daro gaareysa 2,246.
Xafiiska qaabilsan la tacaalista fal dambiyeedyada ayaa la wareegay haraadiga, wuxuuna billaabay howlgal baaritaan ah.
Weerarkii Xuutiyiintu Ku Qaadeen Sucuudiga Oo 50% Hoos U dhigay Wax Soo-saarkii Shidaalka
Daraasad cilmi muhiim ah looga ogaaday xubnaha taranka ragga oo abaal marin heshay